Kuthetha ukuthini ukuphupha itshokholethi? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha itshokholethi kunokuba mnandi okanye koyike, kuxhomekeke kwimeko. Ngubani owakha waphupha ukuba babesitya ibha yetshokholethi emnandi? Okanye nokuba ubufumana iitshokholethi kumntu omthandayo? Oko kwenzeka kubantu abaninzi.
Ukuphupha itshokholethi nako kunokubangela umdla, hayi kuphela ngenxa yokuba ineentsingiselo ezininzi, kodwa kananjalo kuba ngesiqhelo akukho nanye ehambelana nenyani.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi ezona ntsingiselo ziphambili zokuphupha ngetshokholethi? Emva koko funda eli nqaku de kube sekupheleni, sinazo zonke ezi mpendulo!
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha itshokholethi?
2 Iphupha malunga neTshokholethi emhlophe
3 Iphupha malunga neTshokholethi emnyama
4 Iphupha malunga neTshokholethi enyibilikiweyo
5 Iphupha lebha yetshokholethi
6 Iphupha malunga namaPelethi eTshokholethi
7 Iphupha malunga nokutya iChokoleti
8 Iphupha malunga neTshokholethi yobisi
9 Iphupha malunga neTshokholethi eBitter
10 Iphupha malunga neSiraphu yeTshokholethi
11 Iphupha malunga nokutya kakhulu itshokholethi
Eli phupha ikakhulu li malunga nezinto ezintle, kodwa musa ukuba nethemba lekhulu. Kuhlala kulungile ukuhlalutya iphupha ngalinye esinalo ngokweenkcukacha, nokuba nokuchazwa ngokuthembekileyo kwalo.
Iphupha malunga neTshokholethi emhlophe
Ungayivumeli ikwenze ube phantsi, uncame into oyifunayo ngokulula. Musa ukwamkela ngaphantsi kwento ekufaneleyo, ngalo lonke ixesha ulungisa into encinci, uyibekela bucala into obuzabalaza ukuyiphumeza.
Gcina ukhumbula ukuba akukho nto iwa esibhakabhakeni kwaye kubalulekile ukuhlala usilwa. Sukuncama, yonke into izakulunga ekugqibeleni.
Iphupha malunga neTshokholethi emnyama
Yeka ukufuna ukuhoywa, ngalo lonke ixesha usenza oku, ugqibela ngokugxotha abantu onethemba lokuba uza kubafumana.
Nokuba ungavakalelwa njani, ufuna ukuyilawula ngokukhawuleza.
Iphupha malunga neTshokholethi enyibilikiweyo
Iitshokholethi enyibilikiweyo kuya kufuneka ujonge phambili kuba kungekudala iingxaki zakho azizukubakho.
Sukuba nexhala kakhulu ngobomi okanye izinto ezenzekileyo. Zonke izinto ziya kusebenza kwaye zilungelelane, uyakuba nayo yonke impumelelo onethemba layo.
Iphupha lebha yetshokholethi
Ukuphupha ibha yetshokholethi kuthetha ukuba uya kudibana nothando olukhulu lobomi bakho kwezi ntsuku. Ukuvuleleka kubantu abatsha abazazisa kuwe kunokuba yindlela elungileyo yokufumana umntu wamaphupha akho.
Phuma kwindawo yakho yokuthuthuzela ukuba kukho imfuneko, oku kuya kuba luthando olulungileyo oluya kwenza wonke umzamo ukuba ulunge kwiintsuku ezimbalwa.
Iphupha malunga namaPelethi eTshokholethi
Nyaniseka kubahlobo bakho, musa ukuzishiya kubo okanye ubangcatshe, ngekhe ubabone abanye abantu abanje xa usendleleni. Yazi ukuba aba bantu bakulungele ukukhula kwakho kunye nokukhula.
Chitha ixesha elininzi kunye nabahlobo bakho, yenza izinto zokuzonwabisa kunye nabo, kwaye uqhubeke uhlakulela ubuhlobo.
Iphupha malunga nokutya iChokoleti
Thatha ixesha lokuphumla. Unikezele kuxinzelelo oluninzi kwiintsuku zamva nje, kufuneka ulawule le meko ngokukhawuleza.
Ukufumanisa izinto ozithandayo, ukuphuma nabahlobo bakho, ukutyelela elwandle… ukwenza nantoni na enceda izinto zihambe ngokutyibilikayo nangobomi bakho kuya kwenza umahluko.
Iphupha malunga neTshokholethi yobisi
Ukuba uphuphe ukwakhiwa kwetshokholethi yobisi, unokuba nabantu abakungqongileyo abaneemvakalelo ezididekileyo. Nika ingqalelo ngakumbi kwabo bakungqongileyo, kusenokwenzeka ukuba umntu othile wondla uthando ngawe.
Ukuba awuyiphindisi, yitsho kwangoko, ungavumeli omnye umntu akuqhathe, kunokuba buhlungu kakhulu.
Iphupha malunga neTshokholethi eBitter
Ufanelwe ukuvuyisana nokukhula okuphuhlisayo. Landela le ndlela uyilandelayo, wenza umsebenzi omkhulu. Musa ukoyika ukwenza izigqibo, ulungile kuyo.
Ukuba awuqinisekanga ngesimo osithathileyo, yazi ukuba kulungile.
Iphupha malunga neSiraphu yeTshokholethi
Yeka ukulibazisa iintshukumo ekufuneka uzenzile. Beka ubuvila ecaleni kwaye usombulule ubomi bakho kube kanye, kuphela ungakwenza oku ngendlela elungileyo.
Ingabonakala inzima kakhulu, kodwa xa uthatha inyathelo zonke izinto ziqala ukuya phambili ebomini bakho.
Iphupha malunga nokutya kakhulu itshokholethi
Lumka nokugqithisa, inokuba yenza umonakalo omkhulu ebomini bakho. Xa sithetha kakhulu, ayisiyiyo nje malunga neziselo okanye izinto ezinjalo, kodwa ngayo yonke into.
Zonke izinto ezigqithisileyo azilunganga kubomi babantu, kufuneka usoloko usazi.
Ngalo lonke ixesha uphupha itshokholethi, jonga olona toliko luhle. Qinisekisa intsingiselo yalonto ukuze ulungele inqaku elilandelayo.
Fumanisa ngokweentsingiselo, fumana ukuba ulindelwe ebomini bakho. Le inokuba yindlela elungileyo yokulungiselela ikamva.
Kwakuthetha ntoni kuwe ukuphupha itshokholethi? Shumeka oku ebomini bakho, fumana ezinye iintsingiselo zephupha kwibhlog yethu ngokunjalo.